दशरथ रंगशालाको रुप फैरीँदै (फोटोफिचर) | HimalDarpan
दशरथ रंगशालाको रुप फैरीँदै (फोटोफिचर)
काठमाडौँ– मुलुककै ठूलो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल मैदान ‘दशरथ रंगशाला’ को आउँदो फागुनभित्र पुनःनिर्माण सक्ने सरकारको योजना छ । गोर्खा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको सो रंगशाला पुनःनिर्माण हुन नसकेका कारण तीन वर्षयता कुनै पनि खेलकूद गतिविधि हुन पाएको छैन । वि.सं. २०१३ सालमा दशरथ रंगशाला निर्माण रंगशाला नबन्दा नजिकिँदै गरेको १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) र एसियन खेलको तयारीका लागि खेलाडीलाई अभ्यास गर्न पर्याप्त खेल मैदान छैन । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो दशरथ रंगशाला पुनःनिर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार सो रंगशालाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको र आगामी फागुन महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउछन् । ‘नेपालमै हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिता र उद्घाटन सत्र सोही मैदानमा हुने भएकाले हरहालतमा हामी रंगशालाको पुनःनिर्माण निर्धारित समयमै सक्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने।
सन् २०१९ को मार्चमा दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जिम्मा नेपालले पाएको छ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) अन्तर्गत पूर्वाधार पुनःनिर्माण तथा मर्मत शाखा प्रमुख अरुण उपाध्यायले रंगशालाको पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउन समयमै बजेट नआएको गुनासो गरे । अर्थमन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका निर्माण व्यवसायीलाई समेत समयमै पैसा उपलब्ध गराउन नसकेको शाखाको भनाइ छ ।
सबै पक्षको सहयोग भएमा आगामी सन् २०१९ फेबु्रअरीभित्रै भिआइपी प्यारापिटसहित सम्पूर्ण प्यारापिटमा कुर्सी जडान गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने राखेपको दाबी छ । ‘हामी छिटो निर्माण कार्य सक्ने पक्षमा छौं, बजेट बेलैमा नआउँदा कसरी हुन्छ त समयमै काम ?’ निर्माण शाखा प्रमुख उपाध्याय प्रश्न गर्छन् । अहिले पुनःनिर्माण गर्न लागिएको रंगशाला साधारण र भिआइपी प्यारापिट गरी १५ हजार दर्शक अट्ने क्षमताको हुनेछ । पहिलेको तुलनामा अहिले केही कम क्षमताको बन्न लागेको हो ।
रंगशाला बनाउन भ्याट बाहेक रु १६ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने बताइएको छ । भत्काउन र निर्माण शुरु गर्न अहिलेसम्म रु ५ करोड खर्च भइसकेको छ । रंगशाला बनाउन अझै साढे ११ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ । क्षतिग्रस्त रगंशालाको ‘फ्लड लाइट’, ‘स्कोर कार्ड’ र ‘सिन्थेटिक ट्र्याक’ बनाउन चीनले सहयोग गर्नेछ । यस अघि पनि ती संरचना चीनले बनाइदिएको हो । रंगशाला निर्माणको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायी सनकसिह राईले भत्काउने काम सकिएको र बनाउने काम एक महिना अघिदेखि शुरु भएको बताए । ढलान र फलामलगायतको काम करिब २० प्रतिशत सकिँदासम्म पैसा नपाएको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ । ‘समयमै पैसा उपलब्ध गराए पो काम तीव्र गतिमा बढ्छ, नभए त काम गर्न नै गाह्रो हुन्छ,’ निर्माण व्यवसायी राईले भने । समयमै भुक्तानी पाए सरकारको लक्ष्यअनुरुप निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने उनको दावी छ । हाल निर्माणाधीन यस रगंशाला क्षेत्रफल १३६ रोपनी जमीनमा फैलिएको छ ।
पहिले खाली मैदान रहेको यो स्थानमा वि.सं.२०१३ सालमा रंगशाला बनाइएको हो । त्यतिबेला फुटबल खेल्ने उक्त सार्वजनिक मैदान सानो टुँडिखेलको नामले प्रसिद्ध थियो । राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकको अवसर पारेर २०१३ सालमा फुटबल, टेबुलटेनिस, कुस्ती, एथ्लेटिक्स र व्याडमिन्टन प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने योजना राखियो । त्यसका लागि खेल मैदानको खाँचो महसुस गरी किरण शम्शेरलाई रंगशाला बनाउने कामको जिम्मा दिइएको थियो ।
त्यतिबेला रंगशालाको पूर्वपट्टि सेनाको छावनी थियो । उत्तरतर्फ बाँसको झयाङ थियो भने दक्षिणतर्फ खुला थियो । पश्चिमतर्फ राष्ट्रका केही विशिष्ट व्यक्ति आउँदा बसेर खेल हेर्ने घर बनाइयो । रंगशालाको पहिलो संरचना त्यहीबेला बनेको हो ।
राखेप सदस्यसचिवका रुपमा वि.सं. २०३४ मा शरदचन्द्र शाह नियुक्त भएपछि यसलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने निर्णय भयो । वि.सं २०३५ मा शुरु गरिएको निर्माण कार्य २०३७ मा सम्पन्न भयो । रंगशालाको अहिलेको स्वरूप २०५५ सालमा तयार भएको थियो । नेपालले आठौं साफ आयोजना गर्ने निर्णयलगत्तै चीनले आधुनिक रंगशाला निर्माण गर्न सहयोग गरेको थियो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आयोजना गरेको त्रिभुवन च्यालेन्ज शिल्ड फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा जनकपुर चुरोट कारखाना र बंगलादेशको मुक्तिजोद्धाबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो । वि.सं. २०४४ फागुन २९ गतेको त्यो दिन अचानक हावाहुरीसहितको वर्षा हुँदा रंगशालामा भागदौड मच्चियो र ७१ खेलप्रेमीले ज्यान गुमाए । सोही घटनामा नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिए । यो घटनालाई नेपाली खेलकूदको इतिहासमा कालो दिनका रुपमा सम्झने गरिन्छ ।
राप्रपा संयुक्तको जनकपुर –लुम्विनी धार्मिक यात्राको रथलाई विभिन्न ठाँउमा भव्य स्वागत
दुनियाँका सबैभन्दा लोकप्रिय सोसल साइटहरु
सिरी ए: रोमासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै युभेन्ट्स..